Mofon'aina Archives - Page 2 sur 68 - FJKM Québec - Canada
Home > Mofon'aina
11 – 20 of 677 items
Hits: 12Mibebaha eo anatrehan’ny Tompo Manavaka ny mpaminany marina sy sandoka ny Tompo ary manome fitarihana antsika fa Andriamanitra no tokony hohenoina sy handraisana fanolorantsaina . Tsy manafina ny marina tokony hambara ny mpaminany marina ary tsy manova izay hanirahana azy na zavatra tsy mahafaly ny olona aza izany indraindray . Matio 4.12-17 Soratra masina […]
Hits: 13Mibebaha eo anatrehan’ny Tompo Manavaka ny mpaminany marina sy sandoka ny Tompo ary manome fitarihana antsika fa Andriamanitra no tokony hohenoina sy handraisana fanolorantsaina . Tsy manafina ny marina tokony hambara ny mpaminany marina ary tsy manova izay hanirahana azy na zavatra tsy mahafaly ny olona aza izany indraindray . Matio 4.12-17 Soratra masina […]
12 avril 2022 by Hery Tahiana Raveloson
10 avril 2022 by Hery Tahiana Raveloson
5 avril 2022 by Hery Tahiana Raveloson